नवीन सोचयुक्त शक्तिशाली पार्टीको खाँचो « News of Nepal
नवीन सोचयुक्त शक्तिशाली पार्टीको खाँचो
१४ श्रावण २०७६, मंगलवार
जसले जेसुकै भने पनि यो मुलुकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र संविधान ल्याउने नेताहरु नै हुन्, तर व्यवस्थित भएन र मुलुक द्रुत विकासमा जान सकेन । कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार हुन्छ, सरकार मुकदर्शक भएर बसेको हुन्छ ।
उदाहरणको लागि देशमा हालै वाइडबडी काण्ड भयो । साढे ४ अर्ब रुपियाँ नमचम भयो तर यही पैसा सही ठाउँमा लागेको भए मुलुकको विकास त हुन्थ्यो नि ! अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यति पैसामा त देशको कुनाकाप्चामा सय–पचासवटा पुल त बन्थे होला । यसबाहेक राजधानीको सडकको खाल्टाखुल्टी त पुरिन्थे होला । खै त सरकारको सोच ? गफ र घमण्ड मात्र धेरै । यसरी मुलुक विकास हुँदैन । भनिन्छ, ‘आइडिया मेक्स मनी एन्ड डेभलप’, यो फर्मुलालाई हरेक सरकारले अपनाउने क्षमता हुनु जरुरी छ । हुन त नेताहरुले जुन मेहनत गरेर मुलुकमा केही परिवर्तन ल्याए, त्यसको लागि हामीले नकारात्मक भावना त्यागी सराहनीय नै मान्नुपर्दछ ।
यो मुलुकमा नेताहरुले सबै कुरा त ल्याए, केही नेपालीको जीवनस्तर पनि केही हदसम्म बढाए । तर साथसाथै केही गल्ती पनि गरे । यसको कारण शिक्षाको कमी र राजनीतिक कलह पनि हो । देश हाँक्नेहरुको विदेशप्रति झुकाव बढी नै देखिन्छ । कडा प्रधानमन्त्रीको आगमन नै नभएको पनि हो । यो कुरा भने सोचनीय छ । यत्रो योगदान भएर पनि नेताहरुमा यो सोच आएन कि अब हामीले अरु नयाँ–नयाँ पार्टीहरुलाई पनि मौका दिनुपर्दछ । अब यो मुलुकमा हामीदेखि अघाइसकेका छन्, त्यसकारण अब हामीले नयाँ पार्टीहरुलाई पनि केही मौका दिनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । यसबाहेक आफ्नो पार्टीमा पनि राम्रा व्यक्ति तथा नयाँ अनुहारहरुलाई चुनावको समयमा टिकट दिने हो, न कि सधैँ आफ्नो मान्छेलाई मात्र टिकट दिएर उम्मेदवार बनाउने हो ।
एक हिसाबले भन्ने हो भने, देश चलाउनेहरुको जीवन ८० प्रतिशतभन्दा बढी गइसक्दा पनि अझै यिनीहरु सत्ता र कुर्सीको लालच, स्वार्थको पछि दौडिराखेका छन् । सधैँ नेताहरुलाई मात्र औंल्याउनु राम्रो कुरा पनि होइन, मानिसले यो मुलुकमा अब नयाँ, राम्रा, कडा नेताहरुको अपेक्षा राख्नु राम्रो कुरा हो ।
जुनसुकै सरकार आए पनि प्रधानमन्त्रीहरु कडा हुन नसक्नु नै यो देशको विडम्बना हो । मुलुक द्रुत विकासमा जान नसक्नुको कारण पनि यही नै हो । हुन त प्रधानमन्त्रीले कुर्सी समात्नेबित्तिकै कैयौं झमेलाले घेरिने हुन्छ । यस्ता समस्यालाई सल्टाउनु नै प्रधानमन्त्रीको खूबी हो । जुन आजसम्म मानिसले हेर्न पाएनन् यो मुलुकमा, अन्यथा यो मुलुकमा भ्रष्टाचार, असुरक्षा, महँगी आदिको समाधान हुन्थ्यो होला ।
एकपल्ट फेरि भन्छु– अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकमा नयाँ–नयाँ नेता तथा नयाँ–नयाँ पार्टीहरुको खाँचो छ, चाहे कम नै किन नहोस् । हाम्रो देशमा शायद यही बाध्यताले ‘खाए खा नखाए घिच्’ भनेझैँ हामी सधैँ उही अनुहारलाई भोट दिन बाध्य हुन्छौं । अलिकति स्वार्थ भावना त्यागेर यो संस्कारलाई बदलौं न, कसरी हाम्रो देशको विकास नहोला त ?
हाम्रो जस्तो मुलुकमा जुनसुकै सरकार आए पनि भिजनको कमीले गर्दा नचाहिने कुराहरुमा अल्झिराखेको हुन्छ । यहाँ राम्रा–राम्रा विज्ञहरुको कमी छैन । यस्ता विज्ञहरुको परामर्श लिएर देशलाई अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो । अन्यथा सधैँ काण्ड नै काण्ड त हो नि, जुन आजभोलि हामी भोगिराखेका छौं ।
हाम्रो देशको अवस्थालाई हेर्दा हरसमय घमण्ड, कलह, द्वेष आदि कारणले गर्दा राजनीतिक अवस्था डामाडोल हुनु स्वाभाविक हो । अर्को कुरा, आफ्नो मान्छेले मात्र कुर्सीको लागि अवसर पाउनु, जान्नेसुन्ने बुद्धिजीवीहरु बेकार भएर बसिराख्नु, यो भन्दा लाजमर्दो कुरा अरु के होला देशका लागि ? त्यसकारण अब उप्रान्त हरेक सरकारी पदको पूर्ति खुल्ला प्रतियोगितामार्फत नै हुनुपर्दछ, चाहे त्यो आन्तरिक क्षेत्रमा नै किन नहोस् ।
देशमा ऋणभार, उद्योग–व्यापारमा घाटा, बढी निर्यात, बैंकमा तरलता आदि कुराले गर्दा सबैको कपाल दुखाइ भएको छ । यसबाहेक युवा पुस्ताको विदेश पलायनजस्ता कुरालाई सोच्नै पर्ने देखिन्छ । मुलुक हाँक्नेहरुले यो देशको अवस्था राम्रो गर्नको लागि भ्रष्टाचार, गुटबन्दीलाई त्याग्नुपर्छ । साथै कर्मचारी फेरबदल, विज्ञहरुको राय–सुझाव आदि कुरामा ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ । समग्रमा भन्नुपर्दा देशमा जुन प्रणाली आए पनि सर्वप्रथम राम्रो सोचको विकास गर्ने हो । नकारात्मक र पुरानो सोच त्यागी एक–अर्कालाई सहयोग गर्ने हो, न कि एक–अर्कालाई लाञ्छना लगाई मुलुकको दु्रत विकासलाई रोक्ने हो । अहिलेको अवस्थामा जनता सक्षम हुनु पनि उत्ति नै जरुरी छ ।
रमेशकेशरी वैद्य, छत्रपाटी, काठमाडौं
प्याज किन्ने पैसाले बरु शेयर किनौं
नेपाली टोलीले साँच्चिकै सबैको मन जित्यो
मेडिकल माफिया बन्द गर्नै पर्छ
नेपाली विद्यार्थी नेपाली भाषामै किन कमजोर
माथिल्लो भोटेकोशी परीक्षण प्रसारण शुरु, व्यापारिक उत्पादन १५ दिनपछि
निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन निर्देशन
चितवनमा अटो दुर्घटना हुँदा पाँचको मृत्यु,..
तीन नेपाली महिला बक्सर फाइनलमा
आगामी निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनाउन अन्तरघातीलाई..
भोलि काठमाडौंका यी रुटमा सावारी चलाउन नपाइने
केबल–कार चल्यो पर्यटक बढ्याे
४२ किलोमिटर म्याराथन दौडमा नेपालका किरणले जिते स्वर्ण
भगौडा महिला बलात्कार गर्ने सेना अधिकारी
टोकियोमा नेपाली विद्यार्थीको निधन
मध्यपुर सञ्चार समाजमा नयाँ नेतृत्व
चितवनमा अटो दुर्घटना हुँदा पाँचको मृत्यु, एक गम्भीर घाइते
नेकपाले छान्यो रामेछापका आठ स्थानीय तह हाक्ने नेता, ६०-४० मै मिल्यो कुरा